Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Ezekiel 8
Nepali New Revised Version, Ezekiel 8
1 छैटौँ वर्षको छैटौँ महिनाको पाँचौँ दिनमा जब म आफ्‍नो घरमा बसिरहेको थिएँ, र यहूदाका धर्म-गुरुहरू मेरो सामुन्‍ने बसिरहेका थिए, तब त्‍यहाँ परमप्रभु परमेश्‍वरको बाहुली ममाथि पर्‍यो।
2 तब मैले हेरें, र मानिसको रूप भएको आकार मैले देखें। तिनको कम्‍मरमुनि तिनी आगोजस्‍तै थिए, र कम्‍मरदेखि माथिचाहिँ तिनको अनुहार टल्‍काएको धातुको झलकजस्‍तै देखिन्‍थ्‍यो।
3 तिनले हातजस्‍तै आकार पसारेर मेरो कपालको लट्टा समातेर मलाई जुरुक्‍क उठाए। त्‍यसपछि आत्‍माले मलाई पृथ्‍वी र स्‍वर्गको बीचमा उचालेर परमेश्‍वरका दर्शनहरू देखाउँदै यरूशलेममा मन्‍दिरको भित्री चोकमा प्रवेश गर्ने उत्तरपट्टिको मूल ढोकानेर लग्‍नुभयो। त्‍यहाँ डाह तुल्‍याउने मूर्तिको आसन थियो।
4 अनि मैले मैदानमा देखेको दर्शनजस्‍तै त्‍यहाँ मेरो सामुन्‍ने इस्राएलका परमेश्‍वरको महिमा थियो।
5 तब उहाँले मलाई भन्‍नुभयो, “हे मानिसको छोरो! अब तेरो आँखा उठाएर उत्तर दिशातिर हेर्‌।” तब मैले हेरें, र वेदीको उत्तरपट्टिको प्रवेशद्वारमा त्‍यो डाहको मूर्ति मैले देखें।
6 अनि उहाँले मलाई भन्‍नुभयो, “हे मानिसको छोरो, तिनीहरू के गर्दैछन्‌, के तँ देख्‍छस्‌? इस्राएलको घरानाले मलाई मेरो पवित्रस्‍थानबाट पर हटाउनलाई घिनलाग्‍दा काम यहाँ गरिरहेका छन्‌। तर तैंले त्‍योभन्‍दा अझ बढ़ी घिनलाग्‍दा कामहरू देख्‍नेछस्‌।”
7 तब उहाँले मलाई चोकको प्रवेशद्वारमा ल्‍याउनुभयो, र मैले हेरें। त्‍यहाँ भित्तामा मैले एउटा प्‍वाल देखें।
8 उहाँले मलाई भन्‍नुभयो, “हे मानिसको छोरो, यो भित्तामा खन्‌।” अनि जब मैले त्‍यो भित्ता खनें, तब त्‍यहाँ एउटा ढोका मैले देखें।
9 अनि उहाँले मलाई भन्‍नुभयो, “भित्र गएर तिनीहरूले यहाँ गरिरहेका अति खराब र घिनलाग्‍दा कामहरू हेर्‌!”
10 यसैले म भित्र पसें र मैले हेरें। चारैतिर भित्तामा सबै किसिमका घस्रने जन्‍तुहरू, घिनलाग्‍दा पशुहरू र इस्राएलको घरानाका जम्‍मै मूर्तिहरूका चित्रहरू त्‍यहाँ बनाइएका मैले देखें।
11 तिनीहरूका सामुन्‍ने इस्राएलको घरानाका सत्तरी जना धर्म-गुरुहरू र शापानको छोरो याजन्‍याह तिनीहरूका साथमा उभिरहेका थिए। हरेकको हातमा आ-आफ्‍नो धुपौरो थियो, र धूपको सुगन्‍धित धूवाँ मास्‍तिर उठिरहेको थियो।
12 तब उहाँले मलाई भन्‍नुभयो, “हे मानिसको छोरो, इस्राएलको घरानाका धर्म-गुरुहरू हरेकले अँध्‍यारोमा आ-आफ्‍नो मूर्तिको पूजाकोठामा के गरिरहेका तैंले देखिस्‌? तिनीहरू भन्‍छन्‌, ‘परमप्रभुले हामीलाई देख्‍नुहुन्‍न। परमप्रभुले यस देशलाई त्‍याग्‍नुभएको छ’।”
13 फेरि उहाँले मलाई भन्‍नुभयो, “तिनीहरूले गरेका यीभन्‍दा पनि अति घिनलाग्‍दा कामहरू तैंले देख्‍नेछस्‌।”
14 तब उहाँले मलाई परमप्रभुका भवनको उत्तरपट्टिका प्रवेशद्वारको मुखमा ल्‍याउनुभयो र त्‍यहाँ तम्‍मूज देवताको लागि रोइरहेका स्‍त्रीहरूलाई मैले देखें।
15 उहाँले मलाई भन्‍नुभयो, “हे मानिसको छोरो, के तैंले यो देखिस्‌? तैंले योभन्‍दा पनि झन्‌ घिनलाग्‍दा कुराहरू देख्‍नेछस्‌।”
16 तब उहाँले मलाई परमप्रभुका भवनको भित्री चोकमा ल्‍याउनुभयो, अनि त्‍यहाँ वेदी र दलानको बीचमा मन्‍दिरको प्रवेशद्वारमा प्राय: पच्‍चीस जना मानिसहरू थिए। तिनीहरूका पीठ परमप्रभुको मन्‍दिरतिर र अनुहारचाहिँ पूर्वपट्टि फर्काएर पूर्वतिरै सूर्यलाई दण्‍डवत्‌ गरिरहेका थिए।
17 उहाँले मलाई भन्‍नुभयो, “हे मानिसको छोरो, के तैंले यो देखिस्‌? के तिनीहरूले यहाँ गरिरहेका यी घिनलाग्‍दा काम यहूदाका घरानाको लागि सानो कुरा हो र? के तिनीहरूले देशलाई पनि उपद्रवले भरेर मलाई निरन्‍तर रीस उठाउँछन्‌? हेर, तिनीहरूले आफ्‍ना नाकमा हाँगा राखेका छन्‌!
18 यसकारण म मेरो रीसमा तिनीहरूसित व्‍यवहार गर्नेछु। म तिनीहरूलाई टिठ्याएर छोड्‌नेछैनँ। तिनीहरू उच्‍च सोरले मेरो कानैमा कराए तापनि म तिनीहरूको कुरा सुन्‍नेछैनँ।”